वार्ताबाट समस्या हल गरे एमसीसीबाट फाइदा छ, यो पास गर्नुपर्छ: बाबुराम भट्टराई (अन्तरवार्ता) – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun वार्ताबाट समस्या हल गरे एमसीसीबाट फाइदा छ, यो पास गर्नुपर्छ: बाबुराम भट्टराई (अन्तरवार्ता) – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun
वार्ताबाट समस्या हल गरे एमसीसीबाट फाइदा छ, यो पास गर्नुपर्छ: बाबुराम भट्टराई (अन्तरवार्ता)
२९ भाद्र २०७८, मंगलवार १२:५२
जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईराजनीतिक शक्ति र परिचर्चाको केन्द्रका पात्र हुन् । जनमोर्चाबाट राजनैतिक यात्रा शुरु गरेका भट्टराई माओवादी, नयाँ शक्ति, संघीय समाजवादी हुँदै अहिले जसपामा रहेर राजनीति गरिरहेका छन् ।
कुनै समय थियो, उनलाई नेपाली राजनीतिका दुरदर्शी, पढेका, बुझेका नेता मान्नेहरुको जमात बाक्लै थियो । तर, पछिल्लो समय माओवादीबाट छुट्टीएर छोटो समयमा नै दलवदल गरिरहेपछि धेरैले लख काट्छन्, —‘भट्टराईको राजनीतिक भविष्य संकटमा पर्यो । उनले अस्थिर राजनीति गरे ।’
तर, भट्टराई भने आम नागरिकको बुझाई जस्तो दलबदल नभई आफुुले विकास, सुशासन अनि समृद्धिका निम्ती खुड्किलाहरु पार गर्दै गईरहेको तर्क गर्छन् ।
दलबदल, सत्ता सञ्चालन, एमसीसी, चुनावी गठबन्धनलगायत विषयमा पत्रकार अश्विन दानीले पुर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः—
जनमोर्चा, माओवादी, नयाँ शक्ति, संघीय समाजवादी हुँदै अहिले जसपामा हुनुुहुन्छ । यति धेरै दलबदलका पछाडी कारण के छन् ?
दल बदल होइन्, यी एउटै अभियानका रुप हुन् । जनमोर्चा र माओवादी भनेको त एउटै हो । माओवादी भूमिगत जनयुद्धको सशस्त्र तयारीका क्रममा थियो । त्यस क्रममा खुल्ला गविविधि गर्ने मोर्चा सयुक्त जनमोर्चा थियो । त्यसयता नयाँ शक्ति, समाजवादी र जनता समाजवादी भनेको नयाँ शक्ति अर्थात वैकल्पिक शक्ति निर्माण अभियान कै विभिन्न खुट्किला हुन् ।
नयाँ शक्ति एउटा अवधारणा थियो, पछि त्यस विचारसँग मिल्ने शक्तिहरुलाई गोलबन्द गर्दै अगाडि जाने क्रममा थोरै फेरबल गरिएको हो । तर, हाम्रो जुन लक्ष्य थियो । संघीयता, शुसाशन, समृद्धि समाजवाद भन्ने हाम्रो नारा तपाइहरुले देख्नु सक्नुहुन्छ ।
यो भनेको नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिष्टको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने अभियान हो । त्यसैले दलबदल होइन एउटा जनयुद्धको चरण म्म राजतन्त्र अन्य गर्ने र संघिय गणतन्त्र ल्याउने लोकतान्त्रिक क्रान्तिका निम्ति योगदान गर्ने चरणसम्म हाम्रो माओवादी र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्पmतचाहीं लोकतान्त्रिको एउटा चरण पुरा गरिसकेपछि एउटा विकास, शुसाशन र समृद्धि जुन मुख्य एजेण्डा बने त्यसका निम्ति यो चाहीं दोस्रो चरण हो । यसलाई यसरी बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ ।
तर, तपाईंले नेतृत्व गर्नुभएको जसपा पनि अन्तत: फुुट्यो । तपाईँ जुन पार्टीमा त्यही पार्टी विभाजन भईहाल्ने अवस्था देखियो । यो संयोग मात्रै हो ? कि यसका पछाडी कारणहरु पनि छन् ?
त्यो फुटेकै होइन्, विकास निर्माण क्रममा बोटविरुवमा पनि हुर्कने क्रममा ब्रोक्राहरु झर्दै अगाढि बढ्दै जान्छ । बच्चा हुर्कने क्रममा दात झर्दै पलाउँदै जान्छ । त्यो फुटेको, सिद्धिएको, झरेको भन्ने होइन विकास एउटा नियम हो ।
त्यसले समाज विकासको क्रममा दलहरु भनेको समाजका विधमान वर्ग, समुदायका प्रतिनिधि हुन् । त्यहाँ चाँही विभिन्न टक्रार्याउने क्रममा विजातीय शक्तिहरु अर्थात् प्रतिगमन सोच राख्ने शक्ति हुन्छन् ती चाँही एक्लिन्छन् र अग्रगामी शक्तिहरु अगाडि बढ्छन् ।
एउटा वार्ता संवादबाट हल गरेर यो अनुदान सहयोग ग्रहण गरेर जनु नै राष्ट्रिय हित हुन्छ । यसको निम्ति दलहरु बीचमा सहमति बन्नु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
त्यसैले यो टुक्रिएको, फुटको भन्ने हैन, पार्टी सुदुढीकरण सबलीकरणको एउटा प्रव्रिmया हो ।
तर, जसपा विभाजनमा त सिद्धान्त भन्दा पदको लडाईँ मुख्य कारण रह्यो भन्छन् नि ?
त्यो गलत कुरा हो, हामी विचारमा दृढ छौं । त्यसको वरिपरि छौं । एकाध मान्छे आउने जाने कुरालाई पार्टी फुट भनेर लिनु हुँदैन् ।
तपाईं १० वर्ष युद्धमा होमिनुभयो, अहिले विगतमा क्षेत्रीय राजनीति गरेका भनिएका दलसँग सहकार्यमा हुनुहुन्छ । माओवादी जनयुद्धका तपाईंका एजेण्डा अब यस्ता पार्टीले बोक्ने बेला भएर हो कि ?तपाईँले आफुलाई करेक्सन गर्नुभएको ?
होइन जनयुद्धको एजेण्टा त सामन्ती राजतन्त्रको अन्य गरेर देशमा जनताले संविधान आपैmले बनाउने र पँुजीवादी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेर समाजवादको बाटो निर्माण गर्ने चरणमा थियो । त्यो लक्ष्य हामीले पुरा गरिसक्यौँ । अव समाजवाद निर्माण पुरा गर्ने अर्को जिम्मेवारी आएको छ । त्यो भनेको आर्थिक विकास र समृद्धिको आधार तयार परे मात्र समाजवाद आउँछ । त्यसैले यो दोस्रो चरणको चाँही दोस्रो हाम्रो अभियान र पार्टी निर्माण हो ।
यो सरकार त जनताको अभिमतको अपमान गर्दै त्यति बेलाको एमाले माओवादीबाट बनेको नेकपा ओली नेतृत्वको क्रममा उनीहरुले जुन खालको प्रतिगमनकारी, गैरजिम्मेवारहर्कत गरे त्यसको प्रतिरोध गर्ने क्रममा परास्त गरेको यो प्रकारको अन्तरिम चुनावी सरकार हो । त्यसैले यसबाट धेरै अपेक्षा गर्ने कुरा होइन् । तर, यसलाई छिट्टै पुर्णता दिएर जान्छौँ ।
मन्त्रीमण्डल विस्तारमै अलमल भईरहने हो भने संसद पुुुर्नस्थापनाको औचित्य पुष्टि होला र ?
औचित्य पुष्टि होइन्, त्यो त पुर्नस्थापना नभएको भए त ब्यवस्था नै डिलेट हुथ्यो । यो चुनाव नै हुनेवाला थिएन । कम्तीमा यो सरकारले चाँही चुनावगराउँछ त्यो चाँही वैधानिक चुनाव हुन्छ र व्यवस्थाको रक्षा हुन्छ । त्यस अर्थमा पुरानो ओलीको प्रतिगमनकारी हर्कत र यसको तुलना गर्न मिल्दैन ।
यतिबेला देशमा एमसीसीको विवाद छ । एमसीसीका विषयमा जसपा र तपाईँको धारणा के हो ?
एमसीसी एउटा अमेरिकी सहयोगमा प्राप्त अनुदानबाट संचालित हुने विकास योजना हो । त्यसबाट अमेरिकाले हाम्रो जस्ता गरिब देशहरुको पूर्वाधार विकासमा केही योगदान गर्नुपर्दछ भन्ने सोच अन्र्तरगत अगाडि सारेको एमसीसी योजना हो ।
माओवादी आन्दोलन त सामन्ती, निरकुंशवादी राजतन्त्रको अन्त्य गरेर नेपालमा एउटा मौलिक ढंगले पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नका निम्ति निर्माण गरिएको पार्टी र प्रयोग गरिएको एउटा निती कार्यक्रम थियो । अव त्यो संघिय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रको ंसंविधान जारी भइसकेकोपछि त्यो कार्यभार पुरा भयो ।
त्यसमा हामीलाई पनि औद्योगिक अर्थतन्त्रको विकास गर्न, विद्युत प्रसारणका लागि विद्युत आयात निर्यात गर्नका लागि प्रसारण लाइनको आवश्यकता थियो र सँगसँगै सडकहरु रणनीतिक सडकहरुको चाँही स्तरउन्नती गर्नु थियो । त्यसैले यि दुई वटामा केन्द्रीत भएर करिब ६० अर्ब बराबरको जुन अनुदान सहयोग छ ।
त्यो प्राप्त हुनु नेपालकै हितको कुरा थियो । तर, त्यो निर्माण गर्ने क्रममा केही प्रक्रियागत त्रृmटिहरु भए जस्तै, हाम्रो संविधान अनुसार यसलाई अनुमोदन गर्ने आवश्यकता नै थिएन । अनुमोदन गर्ने प्रावधान राखियो । त्यसबाट चाँही एउटा विवाद सुरु भयो । त्यसलाइ एउटा वार्ता संवादबाट हल गरेर यो अनुदान सहयोग ग्रहण गरेर जनु नै राष्ट्रिय हित हुन्छ । यसको निम्ति दलहरु बीचमा सहमति बन्नु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
होइन गठबन्धन त फुटदैन । तर, यस्तो विषयमा राष्ट्रिय महत्वको विषयमा दलहरुले सत्तामा छँदा एउटा कुरा र सत्ता बाहिर हुँदा अर्को कुरा बोल्नु बडो लज्जास्पद कुरा हो । नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरुको यस्तै दोधारो चरित्रले गर्दा नै देश धेरै पछाडि परेको छ ।
त्यसो गर्नु उपयुक्त छैन् । राष्ट्रिय हितमा हामी सबैले एउटै निती लिएर एमसीसी सहमतिले नै पारित गरेर अनुमोदन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
अलिकति प्रसंग बदलौँ । तपाईँले लामो समय संघर्ष गरेको
माओवादीलाई प्रचण्डले पटक पटक विद्यटन गर्दिएँ भन्नुहुन्छ, के कारण रहेछ ?
त्यसैले हामीले त्यो भन्दा अगाडि बढेर वैकल्पिक शक्ति निर्माण तिर जानुपथ्र्याे । त्यसमा प्रचण्ड जी पुरानै ठाउँ टाँसिएर बस्नु भयो । पुरानै सोच र संगठनले काम नगरे पछि उहाँ बेलाबखतमा यसलाई विखण्ड गनुप¥यो भन्नु भएको छ, त्यो औचित्य सिद्धिसक्यो त हामीले पहिल्यै भनेकै हो । त्यसलाई मानेर उहाँ एउटा समाजवादी नयाँ धुव्रीकरण तर्फ जानु नै उपयुक्त हुन्छ ।
आगामी निर्वाचनसम्म नै गठबन्धन जान्छ कि जाँदैन भन्न सकिँदैन । हामी चाँही निर्वाचन गर्ने बेलासम्म चाँही यो गठबन्धन रहन उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
हामीले छोटो समयमै अवधिमा पनि जनताले सम्झनलायकका कामहरु गरेका छाँै । म अर्थमन्त्री छँदा, प्रधानमन्त्री छँदा गरेको कामहरु अहिले पनि जनताले प्रशंसा गछनर्् । कुनै जोगीको कान नचिरेको पनि हुन्छ । सबैलाई एउटै भन्नु हँुदैन ।
त, बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलहरु, गठबन्धहरु फरक फरक बन्न सक्छन् । त्यसैले के हुन्छ अहिल्यै भन्न सकिँदैन । तर, हामी चाहि चाहान्छौँ एउटा बलियो समाजवादी केन्द्र निर्माण होस् त्यसले चाँही कम्युनिष्ट र काँग्रेसको भरपर्दो अग्रगामी विकल्प दियोस् भन्ने हाम्रो चाहान र प्रयत्न छ । अव के हुन्छ त्यो त भविष्यले नै देखाउला ।
बुढीगण्डकी परियोजना मेरै पालामा सुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवको परियोजना हो । त्यसलाई अगाडी बढाउनु पर्थाे । कमिसनखोरहरुको चलखेर र अन्य राजनीति दलका नेताहरु त्यसबाट अनावश्यक प्रभावित रहेर यो ढिला हुन पुग्यो भन्ने मेरो एउटा धाराण हो ।
अहिलेसम्म पनि त्यो अगाढि नबढ्नु चाँही आन्तरिक चलखेलकै मुख्य कारण हो, यो देशको हितमा छैन् । यो छिटै अन्त्य हुनुपर्छ । बुढीगण्डकी परियोजना छिटो बन्नु पर्दछ भने म ठान्दछु ।
त्यसको छानविन हुँदा आवश्यक पर्दा यस्तो प्रमाणहरु दिने हो । मैले जे भनेको छु त्यसमा म अहिले पनि दृढ छु । छानविन हुने प्रव्रिmया अगाढि बढे पछि त्यति बेलामा मैले आफ्नो कुरा भन्ने छु ।
पछिल्लोबजेट हेर्दा तपाईँको गृह जिल्ला गोरखामा बजेट अत्यन्तै न्यून छ । तपाईँले पहल नगर्नु भएको कि ?पहल गरेपनि नटेरेका हुन् ?
मेरो पहललाई प्रतिसोध लिने ढंगले पछिल्लो सरकारले जुन काम गरे खासगरी केपी ओली सरकारले गर्याे । त्यसकारणले गोरखामा भएका बजेटहरु पनि कटौटी भए कुनै पनि नयाँ परियोजनाहरु सुरु भएन ।
खासगरी मेरो पालामा सुरु गरिएका रणनीतिक महत्वका जुन पूर्वाधारहरु थिए । त्यसलाई चाँही पुरै काट्ने र बजेट विनियोजना गर्ने काम भयो । यो गलत थियो । त्यसमा हमेसा निन्दा गर्दै आएकोे छु । गोरखाका जनताले पनि अरु सरह नै कर तिर्दै आएका छन् । त्यसको हिस्सा गोरखाली जनताले पाउनु पर्छ । यहाँका विकास परियोनजा बजेट कट्टी गर्न पाइँदैन र अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ अडान छ ।
तर, पछिल्लो समय नेपाली राजनैतिक दल र नेताहरुलाई व्यंग्य गर्दै आम नागरिकहरुले ‘जुन जोगी आएनी कानै चिरेको’ भन्छन् । मतलब जुन दल अथवा जो व्यक्ति नेतृत्वमा आएपनि जनताले परिवर्तन्को आभाष गर्न पाएनौं भन्छन् नि ?
त्यो सत्य होइन् । हामीले संरचनात्मक कुरा हेर्नुपर्दछ । हामीले छोटो समयमै अवधिमा पनि जनताले सम्झनलायकका कामहरु गरेका छाँै । म अर्थमन्त्री छँदा, प्रधानमन्त्री छँदा गरेको कामहरु अहिले पनि जनताले प्रशंसा गछनर्् । त्यसैले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने होईन् । कुनै जोगीको कान चिरेको हुन्छ, कुनै जोगीको कान नचिरेको पनि हुन्छ । सबैलाई एउटै भन्नु हँुदैन ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको २९ भाद्र २०७८, मंगलवार १२:५२ 42 Viewed